नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघ्यो – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः २३ असार २०७७, मंगलवार १७:४९ July 7, 2020
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप २०४ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।
यो वृद्धिसँगै मङ्गलवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १६,१६८ पुगेको छ। तीमध्ये ७,४९९ जना निको भएका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा ६८८ जना भाइरसमुक्त गएर घर फर्किएका छन्।
अहिले देशभरि आइसोलेशनमा ८,६३४ जना छन्। उनीहरू सक्रिय सङ्क्रमित हुन्। मङ्गलवार पुष्टि भएका सङ्क्रमित काठमाण्डू उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका हुन्।
गत असार १९ गते सर्वाधिक ७४० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। सोमवार विगत पाँच हप्तामा सबैभन्दा कम १८० सङ्क्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गएको तीन दिनमा भने दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। शनिवार २३२ जना र आइतवार २९३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयको दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा बोल्दै डा। गौतमले सङ्क्रमित हुने क्रम घटिरहेको बताए।
को हुन् सङ्क्रमित?
सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। तीमध्ये बाजुराका सर्वाधिक ५४ जना छन्। त्यसैगरी काठमाण्डूमा १४, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा चार जना गरी उपत्यकामा कुल २८ जना छन्।
अछाममा ११ र बैतडीमा ११ जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा बोल्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डेले काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रितको सङ्ख्या बढेको भए पनि समुदायमा नफैलिएको दाबी गरे।
अरू तथ्याङ्क के छ?
विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ६,१३१ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ३।३ प्रतिशत अर्थात् २०४ वटा नमुनानमा भाइरस पुष्टि भएको हो। यससँगै अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट भएका परीक्षणको सङ्ख्या २,६१,८६१ पुगेको छ। अहिले देशभरि क्वारन्टीनमा २५,७२७ जना छन्।
देशका ७७ वटै जिल्लामा कोरोनाभाइरस पुगेको भए पनि मन्त्रालयका अनुसार अहिले तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या शून्य छ।
तर, महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी छ। अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट प्रदेश नं २, ५ र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढेको छ। त्यहाँ सक्रिय सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या अन्यत्रको भन्दा बढी भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
बिरामी बोक्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयको एम्बुलेन्स नुनका बोरा बोक्दै